शेरबहादुर देउवालाई ठूलो झट्का, देउवा र पौडेलबीच फेरि चुनाव, अब के होला ? - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 04:56
शेरबहादुर देउवालाई ठूलो झट्का, देउवा र पौडेलबीच फेरि चुनाव, अब के होला ?
इनेप्लिज २०७२ फागुन २४ गते ३:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २४ फागुन । ११ भोट मात्र नपुगेपछि शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस सभापति बन्ने अवसर गुमाएका छन् । देउवाले झिनो मतले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सभापतिमा फेरि चुनाव हुने भएको छ । सभापति पदका लागि आइतबार भएको मतगणनामा देउवाले खसेको मतको ५० प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा पहिलो चरणमै सभापति बन्ने अवसर गुमाएका हुन् । सभापतिमा निर्वाचित हुन नसकेपनि पहिलो चरणमा उनी पहिलो भए ।
३ हजार १ सय ४७ मत खसेकोमा सभापति जित्न कुनै पनि उम्मेदवारले १५७५ मत ल्याउनुपर्दथ्यो । ११ भोटका कारण देउवा सभापति बन्न पाएनन् । देउवाले १५६४ मत मात्र पाए ।
सभापतिका अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलले ११५२ र कृष्ण सिटौलाले ३२४ मत पाए । अब देउवा र पौडेलका बीचमा मात्र चुनाव हुनेछ ।
अब सिटौलाको मत निर्णायक
सभापतिको पहिलो चरणको चुनावमा तेस्रो बनेका कृष्ण सिटौलाको मत भने अब निर्णायक हुनेछ । सिटौलाले जसलाई सहयोग गर्छन् उही सभापति हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ । मतपरिणाम हेर्दा सिटौला नउठेको भए पौडेलले सजिलै रुपमा चुनाव जित्थे । सिटौलाको सहयोग पाएमा अब पौडेल पनि सभापति हुने सम्भावना बलियो छ । देउवालाई भने पहिलो चरणको तुलनामा भन्दा दोस्रो चरणमा झनै अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।
कुनै पनि उम्मेदवारले बहमुत ल्याउन नसकेपछि काँग्रेस सभापतिका लागि देउवा र पौडेलबीच आजै दोस्रो चरणको चुनाव हुने भएको छ । त्यसका लागि आजै मतदान हुने काँग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।
जर्जियाकी बिबादस्पद रिपब्लिकनकि मार्जोरी ग्रीनद्वारा बाइडेन बिरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता
अमेरिकी इतिहासमा अस्टिन बने प्रथम अस्वेत रक्षा सचिव तथा पेन्टागनका प्रमुख
ट्रम्म्पलाई दोश्रो महाअभियोगको प्रस्ताव सोमबार पठाउने ,परीक्षण वहस फेब्रुअरी ८ बाट सुरु हुने
डिसीमा बाइडेनको सपथग्रहणको एकदिन पछि भएको गोलीकाण्डमा एक किशोर सहित ३ जनाको मृत्यु